Hoggaamiye cusub: ”Rinkeby waa goob dagaal” - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cabdimaalik Shiikh Xassan Cusmaan, guddoomiyaha ururka waalidiinta soomaalida ee xaafadda Rinkeby.
Hoggaamiye cusub: ”Rinkeby waa goob dagaal”
"Rinkeby ma ahan xaafad lagu sifeeyo goob dagaal"
La cusbooneeyay tisdag 19 december 2017 kl 12.30
La daabacay tisdag 19 december 2017 kl 12.00
Kuma filna oo keliya ciidammo dheeri ah ee boliis oo xaafaddaa la geeyo. Waa in loo fekero sidii in laga howl-geleyo goob dagaa si looga xal gaaro dhibaatooyinka ka aloosan Rinkeby, sida ay aamin-san tahay Lise Tamm oo bilowga sannadka 2918 la wareegi doonta xilka madaxa laanta dembiyada caalamiga iyo dembiyada qorsheey-san ee ciidanka ammaanka, mar dhowaantan laga wareeystey laanta idaacadda ee Studio Ett.
-Xaafadda Rinkeby waa xaafad sidii goob dagaal. Kolka uu ciidanka ammaanku ka howl-gelayo wuxuu u shaqeeya habkii milateriga. Waxaan ku fekeray marka dalka Kolombiya. Dhabbadee ayaa loo maray kolkii hubka laga dhigayey jabhaddii Fark. El-salvador maxaa la sameeyay kolkii uu dagaalku istaagay. Sidee wax looga qabtay goobo ka mid ah caalamka ee dhibaatooyin badani la soo gudboonaadeen
-Waa in laga baxo aragtida afar geeska ah oo dhinacyada dhan aan la arkayn, sida ay sheegtay Lisa Tamm.
In haweenka xoogga la saaro
–Wiilashan da’da yar ma ahan in xabsiyada lagu hayo, marka waa in laamaha adeegga bulshada la siiyo qalabka ey u baahan yihiin sidii ey u gacan qaban lahaayeen dhallin-yarada, iney geliyaan rajo ey nolol ka duwan midda dembiyada ku geli lahaayeen.
Suurtagal ma tahay middaa?
-Waxaan fikirkiisa aan wax ka weeydiiyay sarkaal ka tir-san ciidanka ammaanka, tallooyinka wanaag-san ee uu i siiyay ayaa ahaa xoogga saara sidii haweenka loo gacab qaban lahaa, waa ereyadeyda ugu dambeeya.
Arrinkaa ayaa dhaliyay dood ballaaran oo ay ka dhiidhiyeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta qaran, kuwa degmo iyo bulshada ku dhaqan xaafadda Rinkeby iyo nawaaxigeeda.
Wasiirkii hore ee arrimmaha gudaha Anders Ygeman, iminkana haya xilka hoggaamiyaha xubnaha xisbiga Socialdemokraterna u metela baarlamanka ayaa sheegay in aanay ahayn xaaladda ka jirta Rinkeby sida loo dhigay iyo in aan loo baahnayn in xaalad adag la sii adkeeyo.
-Waxaan ka soo hor-jeedaa sawirka laga bixiyay xaafadda Rinkeby inay tahay goob-dagaal.
-Looma baahna in la buunbuuniyo xaaladdaa. Dhibaatada ka jirta ayaa ku filan, sida uu sheegay Anders Ygeman.
Rinkeby ma ahan goob dagaal!
Guddoomiyaha ururka waalidiinta oo sanadka bartamihiisii laga aasaasey xaafadda Rinkeby Cabdimaalik Shiikh Xasan Cusmaan, wuxuu ka mid yahay aabbeyaasha soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Rinkeby. C/maalik Shiikh Xasan Cusmaan ayaa noo sheegay inuu xaafadda ku dhaqnaa illaa iyo 16 jirkiisii welina uu ku dhaqan yahay xaafaddaasi isaga iyo qoyskiisuba. Isagoona sheegay in ururku go’aan ku gaaray in muddada lagu guda jiro fasaxa ciidda miilaadiga ee Nebi Ciise ey dhallin-yarada u qaban doonaan tartan kubbadda cagta ee loogu magac darey "Rinkeby maahan goob dagaal“.
Sideed u aragtaa fikirka in "Rinkeby tahay goob dagaal"?